Ampianaro hanara-dia an'i Jesôsy ny zanakao (Gen. 18:18,19)
Vakio ny amin'ireo raim-pianakaviana ao amin'ny Gen. 18:18,19 sy ny 1 Sam. 3:10-14. Nanao ahoana ny nitaizan'ireo raim-pianakaviana ireo ny zanany?
Manome baiko ny ray aman-dreny Andriamanitra mba hampianatra ireo zanany hanaraka Azy. Ray aman-dreny maro no mino fa ny fikapohana no fomba tsara indrindra hampianarana sy hanitsiana ny zanany (Ohab. 22:15; 23:13; 29:15). Amin'ny fomba diso indraindray no ampiasana ireo toko sy andininy ao amin'ny Ohabolana ireo; misy ireo ray aman-dreny manasazy ny zanany mba hanerena azy ireo hankato. Matetika anefa izany no mitarika ho amin'ny fikomian'ireo zanaka ireo amin'ny ray aman-dreny sy amin'Andriamanitra koa aza.
Mampianatra ny ray aman-dreny hitondra ny zanany amim-pahalemem-panahy (Efes. 6:4; KôI. 3:21) sy amin'ny fahamarinana (Sal. 78:5;Ohab. 22:6;Isa. 38:19;Joe. 1:3) ny Baiboly. Amin'ny maha-ray aman-dreny antsika dia tokony hikarakara ny zanatsika isika (2 Kor. 12:14), ary tokony ho ohatra tsara harahin'izy ireo (Gen. 18:19;Eks. 13:8;Tit. 2:2). Milaza amintsika ny Baiboly mba hitondra ny ankohonantsika araka ny tokony ho izy (1 Tim. 3:4,5,12), ary tokony hanitsy azy ireo rehefa manao fahadisoana izy (Ohab. 29:15,17). Tokony haneho amin'izy ireo ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'izay ataontsika rehetra isika (Isa. 66:13;Sal. 103:13;Lio. 11:11).
Asehon'ny Baiboly amintsika ny tantaran'ireo ray aman-dreny nanao safidy ratsy, i Isaka sy i Rebeka izay nanan-janaka roa lahy: Esao sy Jakôba. Tia an'i Esao mihoatra noho i Jakôba i Isaka, i Rebeka kosa tia an'i Jakoba mihoatra an'i Esao (Gen. 25:28). Nanao toy izany koa i Jakôba taty aoriana rehefa nanan-janaka, tiany mihoatra noho ireo zanany lahy rehetra i Josefa (Gen. 37:3).
Mpitarika ara-panahy i Ely saingy tsy mba nanitsy ny zanany raha nanao ny tsy nety izy ireo (1 Sam. 3:10-14). I Samoela, izay notezain'i Ely koa dia nanjary raim-pianakaviana tsy nahomby tamin'ny fitaizana (1 Sam. 8:1-6). Nandry tamin'ny vadin'ny lehilahy anankiray i Davida ary nampamono izany lehilahy izany avy eo. Ohatra ratsy no nasehony kanefa ratsy noho izay nataony aza no nataon'ny sasany tamin'ireo zanany. Ny mpanjaka Manase indray dia nanompo devoly ka nanao sorona ny zanany (2 Mpanj. 21:1-9). Nanao tahaka izany koa i Ahaza mpanjaka (2 Mpanj. 16:2-4).
Maneho ohatra maromaro ny amin'ny ray aman-dreny naneho ohatra tsara koa ny Baiboly. Ray tsara ho an'i Hadasa izay antsoina koe hoe Estera mpanjaka i Môrdekay (Est. 2:7). Nivavaka ho an'ireo zanany isan'andro i Jôba (Jôba 1:4,5). Misintona lesona ny amin'izay tokony hataontsika sy tsy tokony hatao amin'ny maha-ray aman-dreny antsika isika ao amin'ireo lesona ireo.
Inona no lesona azontsika sintonina avy amin'ny Baiboly mikasika ny fahaizana mitaiza?